Diidmada looga soo horjeedo heshiiska maamul sameynta gobolada Mudug iyo G/gaduud oo sii kordheysa
Khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay maamulka ahlu suna ee gobolada dhexe kaasoo salka ku haya heshiiska maamul u sameynta gobolada Galgaduud iyo Mudug ee koonfurta Somalia oo maalmo ka hor lagu kala saxiixday Muqdisho.
Heshiiskaas ayaa waxaa maamulka ahlu suna u saxiixay Shiikh Ibraahim Guureeye oo ah gudoomiyaha goleyaasha ahlu suna ee gobolada dhexe oo ku sugan hadda magaalada Muqdisho.
Hase ahaatee Shiikh C/risaaq Cali Yuusuf (Al-ashcari) Gudoomiyaha Gudiga Fulinta Ahlusunna oo shir jiraa’id ku qabtay Galgaduud ayaa sheegay iney heshiiskaas ka soo horjeedaan, maamulka Ahlusunana uusan matalin Shiikh Ibraahim Guureeye oo uu sheegay in Xilka laga qaaday xili hore.
maamulka Ximan iyo Xeeb ee ka jira degmada Cadaado iyo degaano kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa iyana ka soo horjeestay heshiiskaas oo ay ku tilmaameen mid aan iyaga lagala tashan cid wakiil ka ahna aysan saxiixin, iyadoo degmada Cadaado uun ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo heshiiskaas.
Arimahan ayaa ku soo aadaya xili maamulka Puntland oo ah maamul goboleedka ugu tunka weyn Somalia uu xiriirkii u jaray dowlada Somalia iyagoo ka carooday heshiishaas oo ay sheegeen in lagu soo daray gobolka Mudug oo qeyb ka mid ah ay iyagu ka taliyaan.
Dowlada ayaan la ogeyn sida ay u maareyn doonto mucaaradada lagala hor yimid heshiiskaas ay garwadeenka ka tahay,waxaana arintantani ay ku soo aadeysaa xili muran badan ay ka taagan yihiin arrimaha maamul sameynta koonfur galbeed Somalia, waxayna dowladuu muuqataa in iyadoo aan xalin khilaaf horey u jiray ay abuureyso mid cusub oo xasarad hor leh kicinaya.